Ilay mpilalao sarimihetsika Jack McBrayer dia hanana programa ho an'ny ankizy ao amin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Manohy manitatra i Apple atiny ho an'ny ankizy kely ary vao nifanaraka tamin'ny mpilalao sarimihetsika Jack McBrayer hamorona ilay seho Salama, Jack, fampisehoana hatsaram-panahy ho an'ny Apple TV +, araka ny Variety. Ity programa ity dia hanasongadinana ny kintan'ny vahiny mba hanampiana ny ankizy hamaha olana amin'ny fahalalam-pomba sy ny hatsaram-panahy.
Ny mpamorona ny andiany dia ilay mpilalao sarimihetsika tenany, mpilalao sarimihetsika Fantatra amin'ny andiany hatsikana NBC malaza 30 Rock, izay nitondrany ny toeran'i Kenneth Parcel, andraikitra iray nahazoany loka Emmy tamin'ny taona 2009, loka izay natolotra azy ihany koa ho an'ny andian-tranonkala Rock 30: Kenneth the Webpage y Ny tarehy tsara tarehy dia mankany amin'ny helo (azo jerena ao amin'ny HBO).
Jack McBrayer dia nanjary fantatra tamin'ny alàlan'ny fandaharana Late Night niaraka tamin'i Conan O'Briean sy dia nampindrana ny feony amina andian-tsarimihetsika maro an'isa como el Phinneas sy Ferb, Big mouth sy ny sarimihetsika Misaraka ralph, sarimihetsika voatendry ho an'ny Oscar 2012 amin'ny sokajy Sarimihetsika Animated tsara indrindra.
Miaraka amin'i Jack McBrayer dia mijoro izy Angela Santomero ho mpiara-mamorona ny andiany. Blue's Clues (Blue's Clues amin'ny teny anglisy) dia iray amin'ireo sanganasa malaza indrindra ao Angela ho an'i Nickelodeon. Nandray anjara tamin'ny andiany ihany koa izy Super maninona, Ny mpiara-monina amin'i Daniel Tiger y Vahindanitra mamorona ankoatra ny hafa.
Ity andiany vaovao ity dia novokarin'i 9 Story Media Grupo (mpandresy amin'ny Emmy Awards maro) sy ny studio Brown Bag Films, izay notendrena tamin'ny fotoana maro ho an'ny Academy Awards any Hollywood. Wendy Harris sy Vince Commisso dia, miaraka amin'i Jack McBrayer sy Angela Santomero mpamokatra mpanatanteraka.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe rahoviana i Apple no kasaina hanombohana voalohany amin'ny Apple TV + ity atiny vaovao ity dia mikendry ny kely indrindra amin'ny trano. Raha jerentsika fa, raha ny teoria, dia hotifirina amin'ny fahitalavitra io, dia azo inoana fa ho azo alohan'ny faran'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ilay mpilalao sarimihetsika Jack McBrayer hanana seho an-tsehatra amin'ny Apple TV +